I-3BHK ebanzi futhi enomoya ophansi we-10th floor
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sherin
Indawo yami iseduze nenkaba yedolobha, ukubukwa okuhle, kanye nobuciko namasiko nezindawo zokuthenga nezokuthutha zendawo. Ifulethi elingaphansi kwe-10. Ibheke echibini namasimu e-paddy. Indawo enhle kakhulu. Kuheleza umoya futhi kuvulekile.
Indlu ivulekile impela futhi indawo iseduze nazo zonke izindawo ezinkulu zezivakashi ezihlanganisa izindawo ezingemuva zaseKumarakom, kochi, Vagamon kanye neMunnar. Kumaphakathi nedolobha lase-kottayam, yingakho ukufinyelela okulula ezindaweni zokudlela zasendaweni, izindawo zokuthenga kanye nezokuthutha zomphakathi.
Ifulethi limaphakathi nedolobha kodwa futhi likude nesiphithiphithi sedolobha yingakho uthola ukujabulela ukuzola kanye nempilo yaseKottayam. Inqwaba yezindawo zokudlela ezinhle nezitolo ongakhetha kuzo.
Kuyoba khona umuntu ozohambisa ukhiye. Imininingwane izonikezwa uma ukubhukha sekuqediwe.